युक्रेनमाथि किन आक्रमण गर्न चाहन्छन् पुटिन ?- विश्व - कान्तिपुर समाचार
युक्रेनमाथि किन आक्रमण गर्न चाहन्छन् पुटिन ?
युक्रेनको स्वतन्त्रता र समृद्ध लोकतन्त्रले आफ्नो शासनमाथि खतरा उत्पन्न हुने ठान्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पश्चिमा विश्वले आफूलाई रोक्न सक्दैनन् भन्ने देखाउन चाहन्छन्
माघ ११, २०७८ बुद्धिसागर मरासिनी
काठमाडौँ — पछिल्ला केही दिनयता युक्रेन र रुसी सीमामा विकसित घटनाले विश्वको ध्यान खिचेको छ । युरोपसँग नजिकिएको युक्रेन उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो)मा आबद्ध हुने तयारीपछि चिढिएको रुस आक्रमणका लागि उचित समयको पर्खाइमा देखिएको छ । त्यसका लागि रुसले केही दिनयता युक्रेनी सीमामा एक लाख सैनिक तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा ६० वटा रुसी युद्धभूमि तयार गरिसकिएको गुप्तचर रिपोर्टले पुष्टि गरेको बताएका छन् । रुसी सेनाले युद्धका क्रममा आवश्यक पर्ने अस्पताललगायतका संरचना भने बनाइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । तर युक्रेनमाथि हमला गर्न लागेको भन्ने पश्चिमा देशको आरोप भने रुसले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
‘यो निकै ठूलो संकट हो । सम्भवतः शीतयुद्धको अन्त्ययताकै सबैभन्दा ठूलो,’ नाटोका पूर्वराजदूत इभो डाल्डरले पछिल्लो अवस्थाबारे भनेका छन्, ‘अर्को देशमाथि आक्रमण गर्नका लागि मध्ययुरोपमा यतिका धेरै सेना र सैनिक सामग्री राखेको लामो समयपछि देख्न सकिन्छ ।’ डाल्डर युक्रेनको स्वतन्त्रता तथा सफल र समृद्ध लोकतन्त्रले आफ्नो शासनमाथि खतरा उत्पन्न हुने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको बुझाइ रहेको दाबी गर्छन् ।
बेलायत, अमेरिका तथा युरोपेली संघले युक्रेनमाथिको आक्रमण महँगो पर्ने चेतावनी दिएपछि भने रुस केही शान्त भएको आकलन गरिएको छ । तर ठूलो आक्रमण नगरेपछि रुसले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि हमला गर्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ ।
‘एक लाख रुसी सेना एकैपटक युक्रेन पस्दैनन् । तीमध्ये अधिकांश दबाब सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा बस्छन्,’ युरोपस्थित अमेरिकी सेनाका पूर्वकमान्डर होड्ज भन्छन्, ‘त्यसका साथै पुटिनलाई पश्चिमा विश्वले मलाई रोक्न सक्दैनन् भन्ने देखाउनुपर्ने पनि छ ।’
जुनसुकै बेला कुनै आक्रमण हुन सक्ने कारण बेलायतले युक्रेनस्थित दूतावासका केही कर्मचारी र उनीहरूका आफन्तलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, अमेरिकाले पनि दूतावासका कर्मचारीका आफन्तलाई युक्रेन छाड्न आदेश दिइसकेको छ । अत्यावश्यकबाहेकका कर्मचारीलाई पनि युक्रेन छाड्न अनुमति दिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनबाट बाहिरिन भनिसकेको छ ।
बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले युक्रेनमा रुसले हस्तक्षेप गरे स्थिति भयावह हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘त्यसो भएमा अवस्था निकै भयावह, दर्दनाक, हिंसात्मक र रक्तपातपूर्ण हुनेछ,’ जोन्सनले भनेका छन् । जोन्सनले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनका लागि बेलायतले नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको बताए ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन । तस्बिर : एपी
अमेरिका, यूके र युरोपेली संघले यसअघि नै रुसमाथि ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्रमा सन् २०१४ देखि नै प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । त्यसका साथै सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा हस्तक्षेप, अमेरिकामाथिको साइबर आक्रमण र सन् २०१८ मा बेलायतमा गरिएको स्नायु प्रणाली आक्रमणपछि थप प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर रुसले ती घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
अमेरिका, बेलायतलगायत नाटोका सदस्य राष्ट्रले युक्रेनलाई हतियारहरू उपलब्ध गराएका छन् । अमेरिकाले सहयोग गरेका ९० टन बराबरका हातहतियार युक्रेन पुगिसकेका छन् । त्यस्तै, प्रतिरक्षाका लागि सैन्य बल पठाउने बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइ छ । फ्रान्सले नाटोको कमान्डमा रहने गरी रोमानियामा सैनिकहरू पठाउने बताएको छ । ब्ल्याक सीमा युद्धपोत पठाएको डेनमार्कले लिथुवानियामा ४ वटा लडाकु जेट राख्ने भएको छ । त्यस्तै स्पेनले पनि लडाकु विमान पठाउन लागेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, अमेरिकाले ८ हजारभन्दा बढी सैनिकलाई पूर्वी युरोपमा तैनाथ गर्न तयारी अवस्थामा राखेको छ । अमेरिकाको पेन्टागनस्थित रक्षा विभागले ८ हजार ५ सय सैनिकलाई ‘अलर्ट’ राखेको हो । पेन्टागनका अनुसार सैन्य टोलीमा लडाकुसहित स्वास्थ्यकर्मी र जासुसहरू पनि समावेश छन् । उक्त टोलीले पूर्वी युरोपमा नाटो सैन्य गठबन्धनलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
रुसले आफ्नो सीमा क्षेत्र र बेलारुसबाट एकैसाथ आक्रमण गरेर युक्रेनी सेनालाई विभाजित गर्ने रणनीति बनाएको कतिपयको अनुमान छ । त्यसको तयारीका लागि रुसी सैनिकको विशेष फौज युक्रेनको उत्तरमा पर्ने बेलारुस पुगिसकेका छन् । गतवर्ष सत्ता बचाइदिएपछि रुसी राष्ट्रपति पुटिन र बेलारुसका राष्ट्रपति एलेक्जेन्डर लुकासेन्कोबीच निकै सौहार्द सम्बन्ध छ । सन् २०२० र २०२१ मा बेलारुसमा सरकार र लुकासेन्कोविरुद्ध शृंखलाबद्ध प्रदर्शन भएका थिए । त्यतिबेला पुटिनले सेना पठाएर आन्दोलन दबाउन सहयोग गरेका थिए ।
रुसविरुद्ध अमेरिका र बेलायत आक्रामक देखिएपछि जर्मनीलगायतका केही युरोपेली देश भने मौन देखिन्छन् । जर्मनीले भने हतियार उपलब्ध गराउन युक्रेनले गरेको आग्रह अस्वीकार गरिसकेको छ । खासगरी जर्मनी र रुसबीच नर्ड स्ट्रिम–२ ग्यास पाइपलाइन परियोजनाको सम्झौता मुख्य कारण हो । यसमार्फत अधिकांश युरोपेली देशमा प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुन्छ ।
मस्कोस्थित गोलोभेन्कि तालिम केन्द्रमा अभ्यास गर्दै रुसी सैनिक । तस्बिर : एपी
रुसी राष्ट्रपति पुटिनको बचाउमा उत्रेपछि जर्मन नौसेना प्रमुख के–खिम स्योनबाख विवादमा तानिएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अरू केही नभई सम्मान मात्र खोजेको उनको दाबी छ । पुटिनले राखेका माग उचित भएकाले पश्चिमा राष्ट्रहरूले उनलाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने स्योनबाखको भनाइ थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेन संकटबारे युरोपेली नेताहरूसँग भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफल गरेका छन् । युरोपेली आयोग र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष, फ्रान्स र पोल्यान्डका राष्ट्रपति, बेलायत र इटालीका प्रधानमन्त्री, जर्मन चान्सलर र नाटोका महासचिव सहभागी बैठकले युक्रेनलाई सम्भावित आक्रमणबाट रोक्न थप सैन्य सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपति बाइडेनले चेतावनी दिँदै रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पश्चिमा विश्वको परीक्षा लिन चाहेका भए ‘गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने’ बताएका छन् । ‘रुसी सेना युक्रेन पसेको खण्डमा अमेरिका र उसका साझेदारबाट तत्काल, कडा र एकीकृत जवाफ पाउने’ अमेरिकाको भनाइ छ ।
युक्रेन नाटोको सदस्य बनेपछि आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ्ने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुने रुसको भनाइ छ । त्यसका साथै, युरोपका पूर्वी भाग र स्टोनिया, लात्भिया र लिथुवानियाबाट नाटोको सेना र सैनिक संरचना हटाइनुपर्ने क्रेमलिनको माग छ । तर रुसका केही मागहरू पूर्वसर्तका रूपमा रहेका भन्दै पश्चिमा देशहरूले अस्वीकार गरेपछि दुई पक्षबीचको वार्ता असफल हुँदै आएको छ ।
सन् २०१९ मा भोलोदिमिर जेलेन्स्की राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै पश्चिमा विश्वसँग नजिकिएको युक्रेन युरोपेली संघको पनि सदस्यता लिने तयारीमा छ । जुन कुरा पुटिनलाई असह्य भएको छ । सोभियत संघबाट सन् १९९१ मा अलग भएको युक्रेन पनि बेलारुसजस्तै रुसको राजनीतिक, आर्थिक तथा सैन्य प्रभावमा रहोस् भन्ने चाहन्छन् पुटिन ।
तर ७/८ वर्षयता भने अवस्था फेरिएको छ । सन् २०१३ मा युरोपेली संघसँग राजनीतिक तथा स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भिक्टोर यानुकोभिचको सत्ता गुम्यो । उनले रुसको सहयोग मागेपछि देशव्यापी प्रदर्शन चर्कियो । युक्रेनको दक्षिणी द्वीप क्रामियामा पुटिनको समर्थनमा प्रदर्शन भए ।
त्यस क्रममा युक्रेनले आफ्नो पक्षका राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गरिदिएपछि रुसले उक्त भूभाग आफ्नोमा गाभ्यो । त्यसयता युक्रेनी सेना पूर्वी सीमामा रुस समर्थित विद्रोहीसँग युद्ध लड्दै आएको छ । उक्त युद्धमा करिब १४ हजारले ज्यान गुमाउनुका साथै २० लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । पछिल्ला दिनमा युद्ध पुनः चर्कने र रुसी सेनाले युक्रेनी सीमा पार गर्ने देखिएको छ ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७८ २१:०९
कार्तिक २, २०७८ बुद्धिसागर मरासिनी
मार्दी हाइ क्याम्प — 'यो दाइ त कस्तो छिटो हिँड्दो रै’च,' माछपुच्छ्रे-९ स्थित फरेस्ट क्याम्पबाट मर्दी भ्युटावरतर्फको उकालो चढ्दै गर्दा मसिनो आवाजमा एक किशोरीले प्रश्न सोधेपछि म पछाडि फर्किएँ ।
'बैनी, सहरमा बसेर बोइलर भइने भो भन्ने चिन्ताले डोर्‍याएर ल्यायो नि यहाँसम्म । हिँड्नै भनेर आएपछि सकेसम्म खुट्टा त चाल्नै पर्‍यो,' मेरो जवाफ अलिक मन परेन क्यारे, बैनीले हल्का मुख बिगारिन् ।
घान्द्रुकबाट परिवार, छिमेकी र साथीहरूसँग मर्दी बेसक्याम्प ताकेकी गीता खड्कालाई पत्रकारितामा रुचि रहेछ । हालै १२ कक्षाको परीक्षा दिएर बसेकी उनलाई मेरो र साथीहरूबीचको कुराकानीले तानेछ । र पो मसँग गफिन खोजेकी रहिछन् ।
'बैनीहरू चैं कहाँसम्म नि ?' मेरो प्रश्न खस्न नपाउँदै उनकै समूहका एक किशोरले भने, 'कति आफ्नो गाउँ मात्र डुल्ने? यसो अन्त पनि डुलौं भनेर नि दाइ !'
खड्का र उनको समूहजस्तै दसैंको छेको पारेर मर्दी भ्युटावर ताक्नेहरू बाटाभरि बाक्लै देखिन्थे । जसकारण पितम देउराली, पोथना, फरेस्ट क्याम्प, लो क्याम्प, बादल डाँडा, हाइ क्याम्पलगायत स्थानका व्यवसायीमा केही उत्साह थपिएको प्रस्टै देखिन्थ्यो ।
माछापुच्छ्रे-९ का व्यवसायी जीवन गुरुङ तिनैमध्येका हुन् । 'कोरोनाले दुई वर्ष त्यसै हल्लियो, अब भने केही आस जागेको छ,' होटेल ग्रिनल्यान्डका सञ्चालक उनले भने, 'केही समय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका कतिपय संरचना हटाउने भनेर वन कार्यालयले पनि दु:ख दियो ।'
अहिले कुरो मिलेपछि भने आफूले होटलको पुनर्निर्माण पनि गरेको गुरुङले बताए । कुराकानीकै बीचमा उनले फर्किंदा चियाखाजा वा खाना खान निम्तो पनि दिन भ्याए ।
कोरोनापछि व्यवसाय चलायमान् हुन थालेसँगै होटल सञ्चालकलगायत खुसी देखिए पनि आइतबार र सोमबार मर्दी उक्लेका पर्यटकको मनमा भने चिन्ता थपिएको थियो । कारण, बिग्रँदो मौसम ।
ट्रेकिङका लागि उत्तम ठानिएको याममै आकाशमा कालो बादल मडारिन थालेपछि गन्तव्यमा पुगेर मनोरम दृश्य हेर्न नपाइने चिन्ताले उनीहरूलाई सताइरहेको थियो । ६ जनाको समूहमा रहेका भक्तपुरका रमेश श्रेष्ठले भने, 'सकभर बेस क्याम्पमै पुग्ने भन्या हो । हेरौं, मौसम र स्वास्थ्यले कति साथ दिने हो ।' नभन्दै आइतबार राति ११ नबज्दै सुरु भएको वर्षा मंगलबार बिहानसम्म थामिएन । सबैको मन अझ बेचैन !
डबल भ्यु गेस्ट हाउसका संचालक सूर्य तामाङका अनुसार सोमबार बिहानै भ्युटावरबाट सूर्योदय हेर्न आइतबार साँझ करिब ४ सय जना हाई क्याम्पमा बास बसेका थिए । तीमध्ये, कास्की, पर्वत, रूपन्देही, लमजुङ, गोर्खा, काठमाडौं, भक्तपुरलगायत जिल्लाका युवायुवती बढी थिए । कोही भने आफ्नो परिवारसहित निस्केका देखिन्थे । विदेशी पर्यटक भने निकै कम मात्र देखिन्थे ।
सोमबार मौसममा सुधार नआएपछि तीमध्ये अधिकांशले बिस्तरा नै छाडेनन् । तामाङचाहिँ कतिपयलाई मौसममा सुधार आउँछ भन्दै सान्त्वना दिइरहेका थिए ।
'यहाँ आइसकेपछि भ्युटावरसम्म पुग्नुपर्छ' भन्दै जुत्ता कसेर उकालो लागेका अधिकांश पर्यटक २५/३० मिनेटको बाटो नहिँड्दै पानीले भिजे । कोही प्लास्टिक र बर्सादीले पानी छेकिरहेका देखिन्थे भने कोही बाटोछेउका ठूल्ठूला ढुंगामा टाउको ओताइरहेका थिए । पानी रोकिने सम्भावना नदेखेपछि हाम्रो समूह बीच बाटोबाटै फर्कियो ।
केही युवायुवती भने बाटो आधा भइसकेको भन्दै पानीको पर्वाह नगरी छिटोछिटो उकालो चढिरहेका थिए । तीमध्येका एक थिए- पर्वत, फलेवासका गौरव श्रेष्ठ । हामी होटेल फर्केको करिब ३ घण्टापछि फर्केका श्रेष्ठलाई मैले सोधें, ‘भाइ के रहेछ त खास ?’
'दाइ भिजियो, दु:ख पाइयो । सयको तातोपानी र दुई सयको कालो चिया पिइयो । दुइटा कटेराबाहेक केही देखिएन,' उनले भने, 'यो पानी कस्तो बेइमानी ।'
प्रकाशित : कार्तिक २, २०७८ १२:५७